Ministry of Health (MOH) Myanmar
MOH - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စုစည်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။
ဒီစနစ်ဆိုးတွေကြောင့် (၁၉၆၂ မှ ၂၀၂၁ ထိ ) ငါတို့လူနာတွေဘယ်လောက်တောင်သေခဲ့ကြပြီလဲ ? ဘယ်လောက်တောင်နာခဲ့ကြပြီလဲ ? ဘယ်လောက်တောင်ခံစားခဲ့ကြရပြီလဲ ?
ဒီအာဏာရှင်စနစ်ဆိုးတွေကို ဒို့မြန်မာပြည်မြေပေါ်မှာ နောင်ဘယ်တော့မှ လုံးဝ မရှိနိုင် မဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်....
ဒို့ခေတ် ဒို့ အချိန်မှာ ဒို့ဘဝ ဒို့အသက်တွေနဲ့ရင်းပြီး အပြီးတိုင်ချေမှုန်းကြစို့
ပြည်သူလူထုအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုကို စစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း
COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့် သေဆုံးမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် ကိန်းဂဏန်းများ
မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုအတွက် COVID-19 ကယ်ဆယ်ရေး / သက်သာချောင်ချိရေး ရန်ပုံငွေအား ပံ့ပိုးကူညီပါ။
ထုတ်ဝေမှု - ဇန်နဝါရီလ ၂၀၂၂
ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ဆိုင်ရာ ဆောင်ရန်/ရှောင်ရန်များစာအုပ် - ဗားရှင်း ၁
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် (ကိုဗစ်-၁၉) သည် လူတစ်ဦးမှလူတစ်ဦးသို့ ကူးစက်နိုင်သော အလွန်ပြင်းထန်သော ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်ငယ်သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာလူမျိုးများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာများကို ဘေးကင်းစေရန်နှင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပြန့်ပွားမှုကို ရပ်တန့်ရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်၍ စာအုပ်ငယ်ကို ရယူနိုင်ပါသည်။
COVID-19 Update ( 14-5-2022 )
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၁၄-၅-၂၀၂၂) 🦠 ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ ၃.၈ သန်းကျော် ရှိပါသည်။🦠 အာရှဒေသတွင်းနိုင်ငံများအနက် COVID-19 လူနာသစ်တွေ့ရှိမှုနှင့် သေဆုံးမှု...
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၂၉-၄-၂၀၂၂)
COVID-19 နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူလူထုကို အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း (၂၉-၄-၂၀၂၂) To download poster : Click Here လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/ Ministry of Health, National Unity Government. Published on:...
COVID-19 Management Guidance for Children
COVID-19 Management Guidance for Children To download PDF – Click Here လှူဒါန်းရန်-https://moh.nugmyanmar.org/donate/ Ministry of Health, National Unity Government. Published on:...
နောက်ထပ် ကိုဗစ်-၁၉ သတင်းများ
Osteoarthritis ( May, 2022 )
အသက်ကြီးသူများတွင် ဖြစ်တတ်သော ဒူးနာခြင်း ( Osteoarthritis ) ( May, 2022 ) အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါတစ်မျိုး (osteoarthritis)ကို အသက်အရွယ်မရွေးခံစားရပေမယ့် ၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေမှာတော့ တော်ရုံမပျောက်ကင်းဘဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ ဒုက္ခပေးနေတတ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုး တစ်ခုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့...
United Nations Global Road Safety Week ( 17-23 , May, 2022 )
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယာဉ်လမ်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ရက်သတ္တပတ်United Nations Global Road Safety Week (၂၀၂၂) ခုနှစ်၊ မေလ (၁၇) ရက်နေ့မှ (၂၃) ရက်နေ့အထိ (၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ မေလ (၁၇) ရက်နေ့မှ...
Vertigo (ချာချာလည်မူးခြင်း ) ( May, 2022 )
ချာချာလည်မူးခြင်း (Vertigo) ( May, 2022 ) ဒီနေ့တော့ချာချာလည် မူးစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ ဆိုတာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူးတတ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့ ဦးနှောက်ကြောင့်(central causes)၊ နားကြောင့် (peripheral causes)၊ မျက်စိကြောင့်(peripheral causes)၊ ခြေထောက်ကြွက်သားဟန်ချက်ထိန်းခြင်း(proprioception)(peripheral...
ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လက်ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြိုကွဲသွားသောအခါ၊ လက်ခံကျင့်သုံးရန်အဓိကအယူအဆ ၃ ခုရှိသည်။
ကျန်းမာရေးသည်ငြိမ်းချမ်းရေးပေါင်းကူးတံတား (HBP) အဖြစ်ဘက်စုံမူဝါဒနှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲသည့်မူဘောင်ဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးလုပ်သားများကိုပဋိပက္ခနှင့်ပဋိပက္ခအလွန်အခြေအနေများတွင်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များ